Mudug & Bari oo u gudbay wareega 2-aad ee ciyaaraha gobollada; Bakool & Gedo oo ku haray wareega 1-aad. – Radio Daljir
Mudug & Bari oo u gudbay wareega 2-aad ee ciyaaraha gobollada; Bakool & Gedo oo ku haray wareega 1-aad.
Garowe, Dec 20 – Waxaa todobaadkii 2-aad ka socda garoonka Mire Awaare tartanka ciyaaraha gobollada Somaliya oo ay maanta ka dhaceeb 2 ciyaar oo dhex maray xulalka Mudug v Gedo, iyo Bari v Bakool.
Ciyaarta 1-aad ee dhex martay Mudug & Gedo ayaa ahayd ciyaar aad u kulul oo labada xulba ay la yimaadeen difaac iyo weerar adag oo fursado badan oo goolal ay ku dhalan kareen aanay jirin, walow ay ka muuqatay xulka Mudug kalsoono iyo firfircoonaan siyaara ahi.
Ciyaartan oo inta badan lagu ciyaarayey bartamaha garoonka ayaa la odhan karaa waxaa ahayd mid farsamo ahaan aad u adag, waxaase gabagabdadii ciyaarta gool aad u bilan dhaliyey xulka gobolka Mudug, halkaasna ay guushu ku raacday.
Gobolka Gedo ayaa hore u lahaa hal dhibic oo ahayd ciyaar barbardhac ah oo uu la ciyaaray gobolka Sool.
Iska kooxdan B, xulalka Sool & Banaadir oo midkiiba hal dhibic leeyahay ayaa beri ciyaari doona, kii labadooda badiya ayaana u gudbi doona wareega 2-aad.
Xulalka Bari & Bakool ayaa iyana maanta ciyaaray, walow ciyaartani ay ahayd mid dhinac keliya ah oo xulka Bari ay weerar ku asqeeyeen xulka Bakool oo u muuqday in aanay sooba ciyaar tegin, balse ay daawasho u yimaadeen.
Bari ayaa dhaliyey 4 gool, 4-0 ayaana ay ciyaartu ku dhamaatay; Xulka Bakool oo hore ay ugu soo badiyeen xulka Sh. Dhexe (4-3) sidaas ayaa ay ku hareen.
Kooxda C waxaa ka soo baxay xulalka Bari & Sh. Dhexe, halka Bakool & J. Dhexe ay ku hareen.
Wareega 2-aad (quarter final) ayaa waxaa u gudbi doona 8-da gobol ee ugu dhibcaha badan 15-ka gobol ee ku tartamaya ciyaaraha gobollada 2010.
Nugaal, Hiiraan, Mudug & Bari ayaa illaa iyo hadda u gudbay wareega 2-aad.